The ụbụrụ nke Nchegbu ndị mmadụ nwere ike ịmata ihe ndị World dị iche iche - News Ọchịchị
The ụbụrụ nke Nchegbu ndị mmadụ nwere ike ịmata ihe ndị World dị iche iche
A ọhụrụ ọmụmụ na-egosi na ndị mmadụ na generalized nchegbu ndutịme onkonshiosli ịkpọ adịghị njọ ihe dị ka egwu, nke nwere ike na-eje ozi ukwuo nchegbu. Nchọpụta ndị a na e bipụtara ihe ikpeazụ izu na magazin Ugbu A bayoloji.
Ọkà n'akparamàgwà mmadụ na-aghọta ọtụtụ iche nke adakarị nchegbu. Ọtụtụ nkịtị bụ generalized nchegbu ndutịme, ma ọ bụ Gad, bụ nke ndị mmadụ ugboro ugboro na-eche nnọọ nchegbu ma ọ bụ na-echegbu onwe ọbụna mgbe o yiri ka o na e nweghị ihe ọ bụ iche banyere.
Samsung awade $ 1.25m-agbata n'ọsọ ite maka Tizen weara ...
19793	5 nchegbu, aghara, , ụjọ jidere
← Livescribe Smartpen 3 Black Edition Review 7 -atụghị anya ojiji ikpe maka Virtual Adị →